को हुन् पावरवाला 'परविरे नेपाली' ? जसले एकाबिहानै मच्चाए 'गाडी अा‌तंक ! - Everest Dainik - News from Nepal
को हुन् पावरवाला ‘परविरे नेपाली’ ? जसले एकाबिहानै मच्चाए ‘गाडी अा‌तंक !
काठमाडौँ भदौ ३१ । अाइतबार एकाबिहानै काठमाडौँको नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा आफ्नो गाडीबाट अन्धाधुन्ध सवारी साधनहरुलाई ठक्कर दिँदै हिड्ने व्यक्ति एमालेबाट निस्काशित रुकुमका ‘परविरे नेपाली’ भएको खुलेको छ।
१० वर्षअघि एमालेको रुकुम जिल्ला कमिटीको वैकल्पिक सदस्य रहेका उनी झुठ र ठगीधन्दामा संलग्न व्यक्ति भएको जानकारी एमाले स्रोतले दिएको छ।
नेपालीले आइतबार बिहानै आफू चढ्ने गाडीले ३ वटा सवारीसाधनलाई ठक्कर दिएका थिए । उनले आफ्नो गाडीको ठक्करबाट पीडितहरुलाई आफू शक्तिशाली मान्छे भएको बताउँदै कुटपिट समेत गरेका थिए । उनले अनियन्त्रित गतिमा हाँकेको बा ६ च ९२२८ नम्बरको कारले एउटा टाटा मोबाइल गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलमा ठक्कर दिएको थियो ।
पीडितहरुले उनलाई पछ्याउँदै अनामनगर पारि मदनभण्डारी कलेज अगाडि नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
एमाले स्रोतका अनुसार, उनी पार्टी र पार्टीका नेताहरुको नाममा ठगी गर्दै हिँड्ने नामुद व्यक्ति हुन् ।
‘नाम ‘परविरे नेपाली’ भएपनि आफूलाई प्रविन नेपाल भनेर चिनाउँथे’ स्रोतले भन्यो, ‘एमाले नेता प्रदीप नेपालको भाई हुँ भन्दै आफ्नो परिचय दिने गरेका थिए।’
भेट भएका नेपालीहरुलाई आफूलाई प्रदीप नेपालको भाईको रुपमा चिनाउने नेपालीले विदेशीहरुसँग आफू एमालेको विदेश विभागको सदस्यको रुपमा चिनाउने गर्थे।
‘एक पटक उनी अमेरिकन राजदूतावास पुगेछन्’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले भने, ‘त्यहाँ एमालेको विदेश विभागको प्रमुख हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिएछन् ।’ बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै थुपै्र नेपालीहरुलाई परविरेले ठगेको र त्यही आरोपमा प्रहरी हिरासतमा समेत रहेको स्रोतले बताएको छ।
यस्तै झुठ र ठगी कार्यमा संलग्न भएपछि उनलाई रुकुम एमालेले कार्वाही समेत गरेको रिजालले बताए ।
आफू सवार गाडीबाट शुक्रबार बिहान अरु गाडीलाई ठक्कर दिएका नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पनि आफू शक्तिशाली भएको बताउन चुकेनन् ।
कतिसम्म भने, प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेपछि उनले अपशब्द प्रयोगका साथ गाली गलौज गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई समेत हप्काएका थिए।